News - Nidaamka daabacaadda Sublimation
Waa maxay habka daabacaadda sublimation
Daabacaadda wareejinta Sublimation waxay marka hore isticmaashaa daabacaadda si ay ugu daabacdo midabyo daabacan oo gaar ah warqadda wareejinta, ka dibna kululaato oo cadaadiso si loogu wareejiyo midabbada dharka. Gaar ahaan, waxay ku saleysan tahay astaamaha sublimation-ka ee kala firdhinta midabyada, xulo kala firdhiso midabyo leh heerkulka heerkulka sublimation ee 180 ~ 240 ℃, kuna qas qashinka si aad midabbo u sameysid. Marka loo eego qaabab kala duwan iyo shuruudaha qaab ahaaneed, Ep ~ J, Midabka midabka ayaa lagu daabacay warqada wareejinta, qaabka iyo qaabka daabacan ee waraaqda gudbinta ayaa xiriir dhow la leh dharka, dheehkana waxaa looga wareejinayaa warqada daabacaadda ilaa dharka kadib ka shaqeynta mashiinka daabacaadda wareejinta 200 ~ 230 ℃ 10 ~ 30s. Fiditaanka ka dib, waxay gashaa gudaha gudaha dharka si loo gaaro ujeedada midabaynta. Geedi socodka kululaynta iyo sublimation, si ay ugu suuro gasho dheehku inuu si toos ah ugu faafo, faakiyuum ayaa had iyo jeer lagu sawiraa dhinaca hoostiisa hoosta walxaha midabkiisu dheehmay si loo gaadho faafitaanka jihada iyo kala wareejinta dheeha loona hagaajiyo tayada wareejinta.
Faa'iidooyinka nidaamka sublimation caadadii T-shirt: saamaynta daabacaadda wanaagsan
Marka shuruudaha u-habeynta funaanada ay aad u adag tahay, habka sublimation dheeha ayaa ah xulasho wanaagsan. Mashiinka ay daabacday tikniyoolajiyada wareejinta sublimation dheeha ayaa leh qaabab wanaagsan, midabyo dhalaalaya, lakabyo hodan ah oo nadiif ah, farshaxan sare, iyo dareen xoog leh oo saddex-cabbir leh. Way adag tahay in lagu daabaco qaabab guud, waana la daabacan karaa sawir qaadista iyo qaababka qaabka rinjiyeynta.
Faa'iidooyinka nidaamka sublimation caadadii T-shaati: badeecada daabacan waxay dareemeysaa jilicsan oo waxay leedahay nolol adeeg dheer.
Muuqaalka ugu weyn ee wareejinta sublimation dheeha ayaa ah in dheehu uu ku faafi karo polyester ama fiber, badeecada la daabacayna waxay dareemeysaa mid aad u jilicsan oo raaxo leh, asal ahaanna ma jiro lakab khad ah. Intaa waxaa sii dheer, maxaa yeelay khadku horeyba wuu u qalalay inta lagu gudajiray wareejinta, nolosha sawirka waa inta nolosha dharka lafteeda, mana jiri doonto dhar iyo jeexjeex muuqaallo daabacan, taas oo saameyn doonta quruxda dharka .